Disney ချစ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း - MoviesFan Movie News
Disney ချစ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Walt Disney Pictures ဟာ Disney ဇာတ်ကားလေးတွေကိုမှ ချစ်တတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို သိပ်မကြာခင် ကာလအတွင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိသွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ဇာတ်ကားအသစ်လေးကတော့ Ashleigh Powell ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Nutcracker and the Four Realms ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lasse Hallstrom နဲ့ Joe Johnston ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ နှစ်ယောက်က ပူးပေါင်းပြီး ဒီဇာတ်ကားသစ်လေးကို ရိုက်ကူးထားတာလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Clara ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်းကနေ စပြောရမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ Clara ဟာ သူမ အမေပေးခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်သေတ္တာလေးထဲက တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို ဖွင့်ယူဖို့အတွက် သော့တစ်ချောင်းကို လိုအပ်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ Clara ဟာ သူမရဲ့ Godfather တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Drosselmeyer ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် အားလပ်ရက်ပါတီကိုသွားရင်း မှော်ဆန်တဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုထဲကို ရုတ်တရက် ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ Clara ဟာ ကြွက်စစ်သည်တွေနဲ့ နယ်မြေသုံးခုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Phillip ဆိုတဲ့ စစ်သည်တော် တစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင်ဘဲ ဆုံတွေ့ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ… ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ…? အဲဒီအချက်က တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
The Nutcracker and the Four Realms ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ Morgan Freeman, Keira Knightley, Helen Mirren, Misty Copeland, Mackenzie Foy နဲ့ တခြားသော သရုပ်ဆောင်တွေက မြိုင်ဆိုင်စွာ ပါ၀င် သရုပ်ဆောင်ထားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Walt Disney Pictures နဲ့ The Mark Gordon ကုမ္ပဏီတွေက ပူးပေါင်း ထုတ်လုပ်ပြီး Walt Disney Studios နဲ့ Motion Pictures ကုမ္ပဏီတွေကနေ ပူးပေါင်းဖြန့်ချိမယ့် ဒီဇာတ်ကားအသစ်လေးကို ၂၀၁၈ – နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ကျရင် ရုံတင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hollywood, Live-action, Walt Disney
Previous Post: မကြာခင်ကြည့်ရတော့မယ့် Julia Roberts ရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်
Next Post: ခေတ္တ ဆိုင်ငံ့ထားရတဲ့ Guardians Of The Galaxy : Vol. 3